प्रवासी नेपाली एकता मंच स्पेनको अध्यक्षमा हेम शेर्पा र सचिवमा अशोक किरण - VON TV
प्रवासी नेपाली एकता मंच स्पेनको अध्यक्षमा हेम शेर्पा र सचिवमा अशोक किरण
२६ माघ २०७६, आईतवार १०:४१ 247 ??? ???????
भोला लामिछाने , युरोप ।
नेकपाको २२ माघमा बसेको बैठकले प्रवासमा क्रियाशील दुई संगठन प्रवासी नेपाली मन्च र नेपाली जनप्रगतिशील मन्चको एकता गरी आफ्नो विदेशस्थित भातृसंगठनको टुंगो लगाएको छ ।
स्पेनमा मंचको अध्यक्षमा हेम शेर्पा चयन भएका छन् भने सचिवमा अशोक किरण न्यौपाने र ३५ सदस्यीय कार्यदल रहेको छ।
कहाँ कसले पाए जिम्मेवारी ? पुरा विवरण सहीत ।